Mac-yada cusub ee leh M1 ee sanadka 2021 wuxuu noqonayaa iMac, MacBook Pro kale iyo Mac Pro | Waxaan ka socdaa mac
Mac-yada cusub ee leh M1-yada sanadka 2021 wuxuu noqonayaa iMac, MacBook Pro kale iyo Mac Pro
Isku soo wada duub wararka xanta ah ee ku saabsan suurtagalnimada bilaabista Apple ee mustaqbalka fog, shirkadda Cupertino ayaa hadda leh xulashooyin kala duwan oo wanaagsan oo miiska saaran. Ugu horreyntii waa inaan dhahno Apple waxay sii wadi doontaa inay adeegsato processor-yada Intel ugu yaraan dhowr sano oo dheeri ah, laakiin Macs badan ayaa M1 cusub soo gelin doona gudaha taasi way sii fiicnaan kartaa bilaha inkasta oo ay horeyba uga awood badnaayeen Intel i9-ka 16-inch Pro sida laga soo xigtay Geekbench kii ugu horreeyay.
Haddii aan dhegeysanno xanta waxaan heli karnaa dhowr MacBook Pro, iMac iyo Mac Pro
Mac Pro wuxuu ahaa xanta ka soo muuqatay gacanta Ming-Chi Kuo oo shaqsiyan u hadlaya waxaan u maleynayaa inay noqon doonto tii ugu dambeysay ee la soo saaro, horeyba qalabkan cusub ee ARM wuxuu u baahan yahay xasillooni iyo waqti in lagu soo saaro qalab gaar ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha, laakiin waxaan ka filan karnaa wax kasta Apple.
Ku saabsan imaatinka cusub ee 16-inch MacBook Pros iyo iMac oo leh processor-yadaas shaki kuma jiro. Xaqiiqdii Apple horay ayey uga shaqeyneysay waxaana laga yaabaa inaan ku helno wax cusub arrintaan bisha Maarso. Si looga fikiro in hadda ay dhowr kombiyuutar ku haysan karaan processor-yada Intel haddii ay dhacdo in isticmaaleyaashu ay doortaan iyaga oo si tartiib tartiib ah u hirgeliyaan MacBook cusub oo leh M1-yada ku yaal buugga. Sidoo kale waa la arki doonaa hadii ay ku horumarin karaan processor-yadaas waqti aad u yar laakiin shaki nagama jiro inay iyaguna haystaan ​​koox dhameystiran oo ku saabsan horumarkan.
Isku soo wada duuboo xoogaa, waa inaan ka feejignaano sii deynta Apple ee xigta tan iyo markii ay suurta gal tahay inay noqon doonaan rubuca koowaad ee sanadka waana hubaal inay ku dari doonaan M1-yadan iyaga dhexdooda ah. Waan arki doonaa haddii ay noqon doonto MacBook Pro ama iMac hada waxaan haynaa MacBook Air, Mac mini iyo 13-inch MacBook Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Mac-yada cusub ee leh M1-yada sanadka 2021 wuxuu noqonayaa iMac, MacBook Pro kale iyo Mac Pro
Sida loo rakibo macOS 11 Big Sur oo xoqan